Ukuhamba komsebenzi: Iyintoni, isebenza njani kwaye ndingenza ntoni ngayo | IPhone iindaba
Ukuhamba komsebenzi: Yintoni le, isebenza njani kwaye ndingenza ntoni ngayo
Ngokuqinisekileyo uninzi lwenu luvile ngesicelo esibiziweyo Ukuhamba komsebenzi. Hayi ngelize, kwi-iPhone News sele sipapashe amanye amanqaku malunga nesi sicelo kwaye sihlala sinamagama alungileyo. Kodwa ixabiso lesicelo (i- € 4.99 ngaphandle kwenyuselo) kunye nokusilela kolwazi malunga nokusetyenziswa kwayo okanye into enokuyenza inokusicothisa kwaye ingafumani sicelo esikufaneleyo, kodwa kakhulu. Isicelo ekufanele ukuba senziwe yi-Apple uqobo, ukusukela ijongeka kakhulu njenge-Mac, iMoto.
Kule nqaku ndiza kuzama ukucacisa izinto ezininzi malunga nokuhamba komsebenzi ukuze amanye amanqaku malunga nesicelo acace kuwe. Kodwa, njengomboniso wokuqala, ndiza kukuxelela ukuba iyasebenza zenzekelayo iintshukumo ezinokudlula nakwezinye izithintelo ze-iOS, ezinje, umzekelo, ukukwazi ukuthumela iifoto ezingaphezu kwe-5 nge-imeyile okanye ukuthumela iingoma ngeTelegram okanye ngePosi (ngo-WhatsApp akunakwenzeka kuba ayihambelani). Ngaphambi kokuba u-WhatsApp athumele iifoto ezisuka kuluhlu, ukuhamba komsebenzi kwasivumela ngolwandiso.
1 Yintoni ukuhamba komsebenzi
2 Usebenza njani ukuhamba komsebenzi
3 Ndingenza ntoni ngokuHamba koMsebenzi
3.1 Jonga nayiphi na ifayile
3.2 Tweet ingoma esiyimameleyo
3.3 Skena kwaye wenze iikhowudi zeQR
3.4 Guqula umbhalo
3.5 Thumela iingoma
3.6 Bhrawuza iCloud Drive
3.7 Thumela ngaphezulu kweefoto ezi-5 ngeposi
3.8 Yenza i-GIF kwiifoto ezininzi
3.9 Vumela i-iPhone isifunde
3.10 Hlela imifanekiso ngeAviary
3.11 Khuphela iividiyo kunye nomculo kwiYouTube
3.12 Khuphela iwebhusayithi kwi-PDF kwaye uyidlulisele kwi-iBooks
3.13 Thumela ii-GIFs kwi-reel, yenza ii-GIF ezivela kwiividiyo, kwaye ujonge zonke ii-GIFs kwi-reel
3.14 Khangela imoto yam
3.15 Rhweba ngaphandle iividiyo ezihamba kancinci
Yintoni ukuhamba komsebenzi
Ukuhamba komsebenzi, njengoko igama lisitsho, kunjalo isicelo "sokuhamba komsebenzi". Iya kusinceda yenza iintshukumo okanye izandiso ukwenza phantse yonke into. Okona kulungileyo kuko konke iintshukumo zinokudityaniswa kunye, eya kusivumela, umzekelo, ukwenza umfanekiso kwaye sabelane ngawo kuTwitter, konke ngaphandle kokushiya i «mini application». Ukongeza kwimisebenzi eqhelekileyo yokuhambahamba, sinokwenza izandiso leyo "siyibiza" kwiqhosha lesabelo (
). Umzekelo, ukukhuphela iividiyo zeYouTube kwiSafari.
QAPHELA: Ukuze sikwazi ukusebenzisa izandiso ngokuthepha kwiqhosha lesabelo, kufuneka kuqala ucofe ku "Okuninzi" kwaye senze kusebenze ukhetho lwe "Run Workflow", ukuba asiyisebenzisi.
Usebenza njani ukuhamba komsebenzi
Ukuhamba komsebenzi kunendawo efanelekileyo yokuba Izenzo ezilula kunye nezenzo ezinenqanaba eliphambili kunokwenziwa. Njengoko ubona kwimifanekiso engezantsi kwale migca, sinee-tab ezimbini: «Iintshukumo» kunye ne "Ukuhamba komsebenzi". Into ekufuneka siyenzile kukuya kwi "Iintshukumo" ithebhu kwaye ubarhuqe (ukugcina umnwe kwisenzo) kwi-Workflow tab. Oku kucacisiwe okokuqala xa sivula usetyenziso, apho sinyanzeliswa ukuba senze iapplet yokwenza i-animated GIFs kwiifoto ezininzi. Ngokwenyani, ukusebenza ngokubanzi kulula, nangona kuya kusiba nzima ukuba sifuna ukwenza into enzima ngakumbi. Kodwa into elungileyo yile kukho indawo yabasebenzisi abenza ukuhamba komsebenzi yonke imihla kwaye ipapashwa kwiwebhu ukuhamba komsebenzi-vcs.de. Ndikucebisa ukuba wenze njengam, okuya kule webhusayithi, usebenzise ukuhamba kwabanye abantu kwaye ubone ukuba benze njani
Gcina ukhumbula ukuba zimbini iintlobo zokuhamba komsebenzi: izicelo, esinokuzisebenzisa ngokungena kwi-Workflow kwaye ucofe kabini isicelo okanye kwi-SpringBoard ukufikelela ngqo (ukuba siyenzile), kwaye ke sinolwandiso, thina ungaqalisa kwezinye usetyenziso, njengokukhuphela iividiyo zikaYouTube.
Ndingenza ntoni ngokuHamba koMsebenzi
Ngokuqhelekileyo yonke into. Nangona usenokongeza ezinye iindlela onokukhetha kuzo, kwaye enyanisweni banokongeza ezinye endizicelileyo, ukuhamba komsebenzi kunezenzo ezininzi ezinokudityaniswa ukuze i-iPhone yethu incitshiswe kancinci kunaleyo ingenayo le sicelo. Eyona nto intle ukwazi ukuba ungayenza ntoni ngokuhamba komsebenzi kukuba utyelele iwebhu endikunike yona kwangoko okanye, into endiza kuyenza, endabelana ngayo nani nonke ukuhamba komsebenzi kunye nezandiso endinazo I-iPhone. Kuya kufuneka ndivume ukuba ezinye zazo zilula kangangoko kunokwenzeka (ezinje nge-tweeting GIFs), kodwa bayawenza umsebenzi.
Jonga nayiphi na ifayile
Ndiza kuqala ngolula kakhulu, kodwa ulwandiso olusebenzayo. Ndithetha ngePreview. Ngolu lwandiso sinokujonga nayiphi na ifayile esinayo kwi-iPhone yethu. Isebenza ngendlela ethe ngqo esiyisebenzisayo kwi-Mac OS X ukuba sichukumisa ibha yendawo xa sinefayile ekhethiweyo. Ngokujonga kwangaphambili sinokubona ukuya kwii-GIFs kwi-reel, ikwasivumela ukuba sibukele iividiyo, simamele umculo, sibone iitekisi ...
Ulwandiso Jonga kuqala
Tweet ingoma esiyimameleyo
Kwisitayile esicocekileyo se #NowPlaying, sinokuTwitter ingoma esiyimameleyo ngomyalezo owenzelwe wena (ingoma, igcisa, i-emoji ...) kunye nomfanekiso weqweqwe le-albhamu.
Ukuhamba komsebenzi Ingoma2Tweet
Skena kwaye wenze iikhowudi zeQR
Akudingeki ukuba sibe nesicelo sokuskena iikhowudi zeQR. Singazifunda kwi-Workflow (kwaye, ukuba ufunda iwebhu, ungayenza ukuba ihambe kuyo ngokuhamba komsebenzi okufanayo). Ukongeza, unokwenza iikhowudi zeQR zethu ukuba sithumele "imiyalezo engenantsingiselo".
Ukuhamba komsebenzi UkuskenaQR
Ukuhamba komsebenzi UmvelisiQR
Sinezixhobo ezikhoyo zokuguqulela isicatshulwa. Isebenza ngokufanayo kuninzi lwezicelo kwiVenkile ye App, kodwa ukuba sele sine-Workflow, sinokwenza ngaphandle kwabanye.
Ukuhamba komsebenzi Guqula iTekisi
Ukuba usetyenziso luyahambelana nokuthumela iifayile, singathumela iingoma kwi-Workflow. Ndivavanye ngokubathumela ngeposi nangeTelegram kwaye isebenza ngokugqibeleleyo.
Ukuhamba komsebenzi SendSong
Bhrawuza iCloud Drive
Esinye sezikhalazo zabasebenzisi ukusukela oko kwafika i-iOS 8 kukungasebenzi kakuhle kweCloud Drive. NgeWorfkflow sinokuhamba ngeefolda ze-iCloud kwaye sijongane neefayile ngaphandle kwesidingo sokusebenzisa usetyenziso kwiVenkile yeApple, kuba phantse zonke zihamba kancinci. Sinokudibana neefayile kwaye sizivule kwisicelo esisibonisileyo.
Ukuhamba komsebenzi ICloud Drive
Thumela ngaphezulu kweefoto ezi-5 ngeposi
Isithintelo esinye esivela kuApple, kwaye ndicinga ukuba kukukhusela isicwangciso sedatha, kukuba asinakho ukuthumela ngaphezulu kweefoto ezi-5. Ngokuhamba komsebenzi, lo mda awukho.
Ukuhamba komsebenzi Imeyile + 5Iifoto
Yenza i-GIF kwiifoto ezininzi
Kuxhomekeke kukuhamba komsebenzi okudaliweyo, sinokukhetha iifoto ezininzi kwi-reel ukwenza i-GIF okanye sinokuthatha iifoto ezininzi ngaphambi kokuyila. Intshukumo endikuzisa yona yeyodidi lwesibini, efana kakhulu nesicelo seJittergram.
Ukuhamba komsebenzi IfotoGIF
Vumela i-iPhone isifunde
Sinokwenza ukuba i-iPhone isifundele isicatshulwa esifakwe ngesandla. Inokuba luncedo ukuba sifuna ukufumanisa ngento esingakwaziyo ukuyifunda ngexesha elithile. Ngendlela efanayo, sinokufumana iwebhusayithi ifundwe kuthi.
Ukuhamba komsebenzi Funda isicatshulwa
Ulwandiso Funda iWebhu
Hlela imifanekiso ngeAviary
Olu lulwandiso olunokuza lula ukuba sifuna ukuhlela umfanekiso ngendlela esingavumelekanga ngayo isicelo sendalo. Umzekelo, ukubuyisa umfanekiso ukutshintsha ubume bawo. Nangona ndiyibize ngokuba "kukukhawulezisa ukuhlela", isenokungangxami ngamanye amaxesha, ewe.
Ulwandiso Hlela ngokukhawuleza
Khuphela iividiyo kunye nomculo kwiYouTube
Into enomdla kubantu abaninzi, kodwa abahlali befumana usetyenziso okanye imowudi. Ngokuhamba komsebenzi sinokwenza zombini. Into embi ngomculo kukuba awuyi kwisicelo soMculo, kungenjalo kuya kufuneka sikhethe omnye umdlali oza kuwvula.
Ulwandiso ukusuka kwiYouTube ukuya kwiReel
Ulwandiso YouTube kwiMP3
Khuphela iwebhusayithi kwi-PDF kwaye uyidlulisele kwi-iBooks
Sinokuguqula iwebhusayithi ibe yiPDF kwaye siyivule ngokuthe ngqo kwii-iBooks. Nangona, ngokuvakalayo, iwebhu ayikhupheli ngokufanayo, umxholo (isicatshulwa, amakhonkco kunye neninzi yemifanekiso) kunokuboniswana ngayo ngaphandle kweengxaki.
Ulwandiso Ukusuka kwiWebhu ukuya kwi-iBooks
Thumela ii-GIFs kwi-reel, yenza ii-GIF ezivela kwiividiyo, kwaye ujonge zonke ii-GIFs kwi-reel
Inketho endingayiqondiyo njengoko ingafumaneki ngokwendalo. Ukuhamba komsebenzi kuya kuhlangula kwakhona kwaye kuya kusivumela ukuba sithumele nayiphi na i-GIF esinayo kwi-reel (okanye kwenye indawo, kodwa ulwandiso kuya kufuneka lutshintshwe). Ukongeza, sinokwenza i-GIF kwividiyo emfutshane (ezinde zixhome isicelo) kwaye ubone zonke ii-GIFs esinazo kwi-reel ngaphandle kokuzikhangela nganye nganye.
Ulwandiso Tweet ii-GIFs ezivela kwiReel
Ukuhamba komsebenzi Yenza i-GIF kwiVidiyo
Ukuhamba komsebenzi Umbonisi weGIF Reel
Khangela imoto yam
Ngendlela efanayo nezinye izicelo ezikwiVenkile ye App, ngokuhamba komsebenzi sinokugcina indawo yemoto yethu kwaye, kamva, silandele indlela ebuyela umva sisebenzisa iimephu zeApple.
Ukuhamba komsebenzi Khangela imoto yam
Rhweba ngaphandle iividiyo ezihamba kancinci
Kwimeko apho uneengxaki zokwabelana ngeevidiyo ngokuhamba kancinci, ukuhamba komsebenzi kuya kusivumela ukuba sigcine iividiyo kwiSlow Motion ukuze zibonwe nakowuphi na umdlali (obalulekileyo: KUWONKE umdlali, iwebhu, inkonzo ...).
Ulwandiso Rhweba ngaphandle iSlow Motion
Njengoko ubona, unokwenza yonke into. Oku kukuhamba komsebenzi endikusebenzisayo, kodwa unokwenza okuninzi ngakumbi. Sukuyeka ukutyelela iwebhusayithi endiyicebise ngaphambili kwaye uya kuziva ngathi i-iPhone yakho ayinamida.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » Ukuhamba komsebenzi: Yintoni le, isebenza njani kwaye ndingenza ntoni ngayo
Iposi elungileyo! Ngaba iyafana ne-IFFFT app? Ngaba ukhe wayisebenzisa le yokugqibela? Andizange ndifumane nantoni na. Ndiyabona ukuba "iiresiphi" zenziwe ngazo zombini. Ndiya kuzikhuphela ukuzama, ndibambe ingqalelo yam.
Mva kwemini, Gaxilongas. Abafani. Ndizamile zombini kwaye IFTTT (ngoku IF)) ukuze xa usenza "into", izenzele ngokuzenzekelayo "enye into". Umzekelo, xa ufaka umfowunelwa kwikhalenda yakho, kwenziwa isikhumbuzi sokuba wenze ikopi yomfowunelwa. Okanye ukuba iqala ukuna, ufumana isaziso. Kwelinye icala, ukuhamba komsebenzi kungenxa yokuba, uthe ngokukhawuleza, wenza ezakho izicelo. Umzekelo, ukwenza ii-GIFs ezihambayo okanye ukufumana imoto yakho.
Enkosi ngengcaciso kaPablo. Ndiyabulisa!
WOW PABLO, ANDAZI UKUBA WENZE ISICELO SOKUBA NDICELE UKUBA NGOKUPHELELEYO UKUTHENGA IIVIDIYO KWI-CAMERA ENGCONO, KODWA NGOKWENKOSI NDIYABULELA KAKHULU, IPOSI EBALULEKILEYO KODWA PHEZU KWAYO YONKE IBlog NDIWAFUNDA NJENGOKUVELA KWIMINYAKA EMI-3 EMINYAKA EMI-4, NDIBULISA NGOKUVENZUELA !!!
Ngokuyinxalenye, ewe 😉 bendikhe ndabona ukuba isicelo silunge njani okwethutyana kwaye izimvo zakho zindinikile ukutyhala kokugqibela ukuze ndabelana ngako nabantu bonke.
I-EEEH PABLO IPOSI EBALULEKILEYO, bendingenalo nofifi lokuba isetyenziswe njani, ngoku enkosi kwinkcazo oyinikileyo, ndiyayiqonda ngcono !! Enkosi !!
Ndiqala kakuhle. Kudala ndifuna ukuyizama kwaye ekugqibeleni ndenze isigqibo. Ndiyifaka kwaye ayindivumeli ukuba ndiye kwasekuqaleni, iphi indawo yokufundisa yokwenza iGif. Inyani yile yokuba ndiya kuseto kwaye akukho nto ibonakala ngaphakathi kwesicelo (bendifuna ukubona ukuba ndigunyazisiwe ukusebenzisa ikhamera kwaye ndisebenzise iifoto ezivela kwifilimu)
Yinto eqhelekileyo le? Into endiyenzayo? Ngaba inokuba nento yokwenza nento yokuba ndine-beta 2 ye-iOS 8.4? Masibone ukuba ungandinceda na, andazi ukuba yintoni enye endinokuzama ...
Isonjululwe. Ndikwazile ukutsiba inyathelo lokulayisha umsinga kwiwebhu
Ndithengile isicelo sokuhamba komsebenzi kodwa xa uyivula indixelela ukuba ndibeke ifoto kwaye ukusuka apho ayenzeki, ayivuli naluphi na umxholo
Molo, Hilario. Sisiqalo esibi, kodwa kukusifundisa indlela yokusebenzisa usetyenziso. Andikhumbuli ukuba ungaya phambili ngoku ngaphandle kokulandela isifundo, kodwa ukuba awukwazi, yenza le nto ikuxelela yona. Kuya kufuneka wenze umzekelo ukuhamba komsebenzi ukuze uqhubeke.
Imibuliso kaPablo, kodwa xa ndimnika ukuba aqhubeke undixelela ukuba ndifuna ukuthatha ifoto kodwa ukusuka apho ayenzeki kwaye akukho nto ivelayo, ukuba unento ofuna ukuyenza undazise
Into yokuqala endiya kuzama ukuyikhupha kunye nokuyifaka kwakhona. Ukuba kusafana, nyanzela ukuqala kwakhona ukuze ubone ukuba ikhamera ibanjiwe.
Ndiyenzile ngokuchanekileyo ngolu hlobo amaxesha ama-3, ndiza kuzama ukuqala kwakhona kwaye ndibone ukuba kwenzeka ntoni, Pablo
Yerani ntloko (@ ntoyiso23) sitsho
umbuzo ungaba yintoni isoftware yokuhamba komsebenzi
Phendula kwi-yerani ceron (@ ceron23yers)
FAKA I-APP NGOKUSETYENZISWA IPA EYENZIWEYO, KE NDINENGXAKI NE-PUSH IZAZISO, NDIFUMANA KUPHELA IZAZISO Kude Ndivule i-APP .... IXESHA LOKUFUMANA IZAZISO NGELI XESHA KWAYE AKUFANELE ULINDE LONKE IXESHA UKUBA KUFIKA INTO. ENKOSI
Phendula kwi RMZ
Molo, into ebaluleke kakhulu kukuba ukuze ndazi yonke into esiziswa yile sicelo, kufuneka ndiluqonde ulwimi, okwangoku ndinalo ngesiNgesi, kodwa ndingalutshintsha njani ulwimi lube sisiSpanish ??? Ndiyabulela ukuba ungandinceda.
rocio munoz sitsho
Ndivula ukuhamba komsebenzi kwaye andazi ukuba yeyiphi endiyikhethayo yokukhuphela iividiyo, akukho nasinye isandi esiya kum, ndithetha ukuba ingeniso eqhubayo, andifumani ngaphezulu koko
Phendula i rocio munoz
Ewe, ngokobuqu, oku kuhamba komsebenzi kwenza into enzima kum, ndiqeshe le nkampani kwaye yandinceda kwaye ukuza kuthi ga ngoku ukusombulula ingxaki yam apha ndishiya ikhonkco lakho https://www.dokuflex.com/
Uyijonga njani ibhetri ye-iPhone kwi-Apple Watch